http://wikimyanmar.co.cc/wiki/index.php?title=%E1%80%97%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%AC | မင်္ဂလာပါ
← myanmar songs
http://wikimyanmar.co.cc/wiki/index.php?title=%E1%80%97%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%AC	Posted on December 31, 2010	by zyishwe 1%80%80%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%AC
Jump to: အညွှန်း , ရှာဖွေရန် မြန်မာ့အွန်လိုင်းစွယ်စုံကျမ်း
အကြောင်းအရာပေါင်း 4232 ခုကို မြန်မာဘာသာ ဖြင့်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
မေးနေကြ မေးခွန်းများ · ဤဝီကီပီးဒီးယားကို လှူဒါန်းရန် (Donate) · Can’t see well? Click here
ကျီးငှက်သည် မိမိအတွက် အစာရှာရမည်ကို မရှာဘဲ မိမိနှင့်မသက်ဆိုင်သော နတ်ပွဲကို ငေးမောရင်း အချိန်ကုန်သကဲ့သို့ မိမိအကျိုး ရှိမည်အလုပ်ကို မလုပ်ဘဲ မသက်ဆိုင်သောနေရာ အလုပ်တွင် စိတ်ပါဝင်စားရင်းအကျိုးမဲ့ အချိန်ကုန်ဆုံးရသည်။
ကျွန်တော်တို့အကြောင်း (About Us)
ပါဝင်လိုလျှင် စာရင်းဝင်ရန်, ရေးရန် လမ်းညွှန် နှင့် လိုက်နာရန် ဝီကီလမ်းစဉ်
အစမ်းရေးလိုလျှင် ဒီအစမ်း စာမျက်နှာ မှာ စရေးလိုက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လိုရေးရမလဲ ဆိုတာ ဖတ်ကြည့် ပါလား။
အကူအညီလိုရင် နည်းစဉ်တွေကို ရှာမလား၊ ရှာမတွေ့ရင် မေးမလား။
အကြံပေးထားခဲ့ မလား။ ဆွေးနွေး မလား။
ယခု သတင်း – ပြုပြင်ရန်
New version of MediaWiki upgraded
WikiMyanmar source codes နှင့် content များယူရန်။
လိုဂို ပြိုင်ပွဲ တွင်သင်ကြိုက်ရာ လိုဂိုကို ရွေးချယ်ပါ။
က–အ အညွန်း – ပြုပြင်ရန်
တပင်ရွှေထီး – မဂဒူး မင်းဆက် – ရာဇာဓိရာဇ် – အနော်ရထာ – မင်းတုန်းမင်း – ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း – သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း – ပြည်ထောင်စုသားလူမျိုးများ – မြို့များ – တက္ကသိုလ်များ – စာရေးဆရာများ – ဓလေ့ထုံးစံ – မြန်မာ့ သိုင်း – မုန့်ဟင်းခါး – ဓမ္မစေတီ ခေါင်းလောင်းကြီး
ဇီဝဗေဒ – ဓာတုဗေဒ – သတ္တဗေဒ – ရူပဗေဒ – ဘူမိဗေဒ – သဘာဝ – ဆဲလ် – လူ – သတ္တဝါ – အပင် – ကမ္ဘာ – ရေ – ဆေးပညာ – စိန်
နျူကလီးယား – ကွန်ပျူတာ – မက္ကင်းနစ် – နာနိုတက္ကနော်လော်ဂျီ – အင်ဂျင်နှီယာ – ပုံတူမျိုးပွားခြင်း – ယာဉ်များ – လေယာဉ်တင် သင်္ဘော
ဂဏန်း – နံပါတ် – ဂျီသြမေတြီ – အက္ခရာသင်္ချာ – ကဲကုလပ် – ကိန်း – စာရင်းအင်းပညာ – စီးပွားရေးပညာ
မနုဿဗေဒ – လူမှုဆက်ဆံရေး – ဖီလိုဆိုဖီ – အချစ် – ဒီမိုကရေစီ – လွှတ်တော်
ကဗျာ – စာပေ – အက – ဇာတ်သဘင် – ရုပ်ရှင်ပညာ – ဂီတ – ရုပ်မြင်သံကြား – သဘင်ပညာ – ဗိသုကာပညာ – ပန်းချီ – ပန်းပု
အစားအစာ – ဝတ်စားဆင်ယင်မှု – ဓလေ့ထုံးစံ – ဘာသာစကား – အနုပညာ – ဘာသာတရား – အားကစား – ဗုဒ္ဓဘာသာ – ခရစ်ယာန်ဘာသာ – အစ္စလာမ်
ဂြိုလ် – ကမ္ဘာ – တိုက် – တိုင်းပြည် – ဒေသ – အာရှ – အာရပ် – ဥရောပ – အာဖရိက – မြောက်အမေရိက – တောင်အမေရိက – ဩစတေးလျ – အန္တာတိက – အာတိတ် – မြေပုံဆွဲပညာ
ရှေးဟောင်းသုတေသန – ကျောက်ခေတ် – ရေခဲခေတ် – အလယ်ခေတ် – သံခေတ် – မြန်မာ့သမိုင်း – ကမ္ဘာ့သမိုင်း – အမေရိကန်သမိုင်း – ခရူးဆိတ် စစ်ပွဲများ – ပထမ ကမ္ဘာစစ် – ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်
ဒီနေ့အတွက် ဖတ်စရာ မှတ်စရာ
လုံချည် ဆိုသည်မှာ အဝတ်စဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဝတ်ဆင်ကြသည်။ လုံချည်သည် ၂ မီတာ (၆ ၁/၂ ပေ) ခန့်ရှည်ပြီး ၈၀ စင်တီမီတာ (၂ ၁/၂ ပေ)ခန့် ကျယ်သည်။ အစကို ပုံမှန်အားဖြင့် ဆလင်ဒါပုံစံဖြစ်အောင် ကွင်းလုံး ချုပ်ထားသည်။ ၎င်းကို ခါးပတ်ဝန်းကျင်မှ ခြေမျက်စေ့ နားအထိဝတ်ဆင်သည်။ ၎င်းကို ခါးတွင် အစတစ်ခုပေါ် တစ်ခု ထပ်ခေါက်၍လိပ်ပြီး အထုံးမပါဘဲ ဝတ်ကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ သက်သောင့်သက်သာရှိစေရန် ၎င်းကိုဒူးခေါင်းနားအထိ ရောက်အောင် ဝတ်ဆင်ကြသည်။
ဤမြန်မာ့အွန်လိုင်းစွယ်စုံကျမ်း သာမက အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများပါ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ရန် ရှိပါသည်။
ရုရှ-မြန်မာ အွန်လိုင်း အဘိဓါန်
မည်သူမဆို ပါဝင်ရေးသားနိုင်သော ရုရှ-မြန်မာ အဘိဓာန်နှင့် ဝေါဟာရအဖွင့်ကျမ်း
သတင်းဌာန · ဆက်သွယ်ရန် · သတိပေးချက် · မူပိုင်ခွင့် · လင့်ခ်ယူရန်
Retrieved from “http://wikimyanmar.co.cc/wiki/index.php?title=%E1%80%97%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%AC“
ပြောရန် source ကိုပြပါ
ညွှန်းထားသည့်စာမျက်နှာ ဆက်စပ်သောအပြောင်းအလဲများ အ​ထူး​စာ​မျက်နှာ ပုံနှိပ် ထုတ်ရန်
Like this:Like Loading...	This entry was posted in new. Bookmark the permalink.	← myanmar songs
Recent Posts	ရွေအိုးလေးမှ….
The new era jornal
Burma	zyishwe	မင်္ဂလာပါ	Createafree website or blog at WordPress.com.